How we will see unregistered usersထတ်း
Hi, can you please help me to translate this three pages: this, this and this into Shan language? Thank you so much !!
မင်္ဂလာပါ@Saimawnkham:ဆရာ ဒီ ပႃ ပြန်လည်းဘာသာပြန်ပေးပါ၊ နောက်ထက် Translatewikiမှာဘာသာပြန်ထက်ဖြည့်ပေးပါဦး တချို့ရှမ်းစာတဝက်ဗမာစာတဝက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပြန်ပြင်ပေးပါ လောလောဆယ်ဆရာအချိန်ရရင် ဒီ ပႃ https://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?group=%21additions&language=shn&filter=%21translated&action=translate https://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Babel-0-n/shn ဘာသာပြန်ပေးပါကျွန်တော်တခြားရှမ်းဘာသာစကားအတွက်ပြန်လည်းကူယူချင်လို့ပါ ကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေပါမယ် thanks.--咽頭べさ (talk) 18:38,2ၵျုၼ်ႇ 2022 (UTC)
Last edited on2ၵျုၼ်ႇ 2022, at 22:51
ၼႃႈ​လိၵ်ႈၼႆ့ မႄးမႃး​ဝႆႉ ၼင်ႇ​ၵမ်း​လိုၼ်း​သုတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း​တီႈ2ၵျုၼ်ႇ 2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:51